Costco hanohy ny laoniny amin'ny fividianana taratasy fidiovana sy rano anaty tavoahangy
Home » Lahatsoratra farany farany » fiantsenana » Costco hanohy ny laoniny amin'ny fividianana taratasy fidiovana sy rano anaty tavoahangy
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Herintaona lasa izay dia nisy ny tsy fahampian'ny varotra, ankehitriny dia manana entana maro izy ireo, saingy misy fahatarana roa ka hatramin'ny telo herinandro amin'ny famoahana azy satria misy fetrany ny fanovana fohy ny filan'ny kamiao sy ny fandefasan'ny mpamatsy.
Costco dia nanambara ny fividianana entana ho avy amin'ny entana sasany mandritra ny antso amin'ny vola amin'ny alakamisy.
Ny fetra amin'ny fividianana velona dia tonga taorian'ny orinasa tsy tambo isaina nametraka lalàna mitovy amin'izany tamin'ny taon-dasa rehefa nanomboka ny areti-mandringana, namela ny talantalana fivarotana nesorina ny zavatra ilaina sasany.
Costco Ny CFO dia nanamarika ihany koa fa ny tsy fahampiana lehibe amin'ny solosaina solosaina dia mbola "miantraika amin'ny zavatra maro", ao anatin'izany ny takelaka, lalao video ary fitaovana lehibe.
Costco Wholesale Corporation, orinasa iraisam-pirenena amerikanina, izay miasa amina fivarotana antsinjarany miisa 500 mahery manerana an'i Etazonia sy 200-plus any ivelany, dia nanambara fa hametraka fetran'ny fividianana entana sasany amidiny izy, mandritra ny antso avo amin'ny alakamisy.
Araka ny Costcony lehiben'ny tompon'andraikitra ara-bola (CFO) Richard Galanti, ny mpivarotra antsinjarany amerika dia hametra ny fetran'ny fividianana entana "key" sasany, ao anatin'izany ny taratasy fidiovana sy rano anaty tavoahangy.
Nitarika ny antso fidiram-bolan'ny orinasa i Galanti, ary nanoritsoritra fanerena maromaro momba ny rojom-panomezana ary nanamarika ny fiakaran'ny vidin'ny fangatahana noho ny areti-mandringana, nilaza fa ny Covid-19 Ny delta variant dia mitarika hazakazaka lehibe amin'ny tahiry.
"Ny antony manery ny rojom-pamokarana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana dia misy ny fanemorana ny seranan-tsambo, ny tsy fahampian'ny kaontenera, ny fikorontanan'ny COVID, ny tsy fahampian'ny singa isan-karazany, ny akora ary ny akora, ny tsindry amin'ny vidin'ny asa ary ny tsy fahampian'ny mpamily sy mpamily," hoy i Galanti, ary nanampy fa "zava-dehibe ny drafitra" nomena ireo fanamby.
Ny CFO dia tsy nilaza mazava hoe oviana no averina averina ny fetra - miaraka Costco manana fividianana fividianana entana sasany teo aloha teo am-piandohan'ny COVID-19.
Tamin'ny fanoharana ny antony tsy fahampian'ny sasany, dia nanonona ny ohatra iray amin'ny orinasan-tsakafo fanadiovana iray izay nitolona hitazomana ny entana teo amin'ny talantalana i Galanti, ary nilaza fa miatrika olana hafa ankehitriny noho ny tamin'ny 2020.
"Herintaona lasa izay dia tsy ampy ny varotra, ankehitriny dia manana entana maro izy ireo, saingy misy fahatarana roa ka hatramin'ny telo herinandro amin'ny famoahana azy satria misy fetrany ny fanovana mandritra ny fotoana fohy ny fitaterana entana sy ny entana ilain'ny mpamatsy, " hoy izy.
Ny CFO dia nanamarika ihany koa fa ny tsy fahampiana lehibe amin'ny solosaina solosaina dia mbola "miantraika amin'ny zavatra maro", ao anatin'izany ny takelaka, lalao video ary kojakoja lehibe, izay manondro ireo olana ireo fa "mety hitatra hatramin'ny 2022."
Ny fetra fividianana nohavaozina dia tonga taorian'ny nametrahan'ny orinasa tsy tambo isaina ny lalàna toy izany tamin'ny taon-dasa Covid-19 nanomboka ny areti-mandringana, namela ny talantalan'ny magazay nesorina tamin'ny zavatra ilaina sasany - angamba ny lehibe amin'izy ireo: taratasy fidiovana.
Na dia nihemotra aza ny mpivarotra hatramin'ny niandohan'ny fividianana fikorontanana, tamin'ny volana martsa, ny talen'ny famokarana hazo pulp Breziliana dia nampitandrina fa misy tsy fahampiana TP hafa eran-tany, ary nilaza fa ny tsy fahampian'ny kaontenera fandefasana dia mety hamokatra tavoahangy henjana mafy azo zaraina.